၂၀၁၁ ကို ဒီကဗျာနဲ့ အဆုံးသတ်လိုက်ရတာ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။
အရေးပေါ်ကိစ္စအားလုံးကိုလည်း ဒီကဗျာနဲ့ အဆုံးသတ်လိုက်ချင်ပါတယ်။
၂၉ ရက်နေ့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပုဇွန်တောင်ပေါက်ကွဲမှုကိစ္စဟာ ၂၀၁၁ ကို ထွက်ခတ်ခတ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေ မပြီးပျောက်နိုင်သေးဘူးလား..။ ဒီလိုမျိုး သေကြေကြရတဲ့ အသက်တွေ ဘယ်လောက်များနေခဲ့ပြီလဲ..။
၂၀၁၂ ကစပြီး ဗမာပြည်ကြီး ငြိမ်းချမ်းပါစေ။ ကမ္ဘာကြီး ငြိမ်းချမ်းပါစေ။
မင်္ဂလာရှိသော သတင်း စာမျက်နှာတွေသာဖြစ်ပါစေ။
အချက်ပြ မီးနီ ကတိုက်ကရိုက် မိုင်ကုန်ဖွင့် မောင်းနှင်သံ
ရုတ်တရက် ဘရိတ်ဆွဲလိုက်တဲ့ အသံ
ဘာမှ ထွက်မကျလာနိုင်တော့တဲ့ အသံ
တွဲလက်တွေ ပြုတ်ထွက်သွားတဲ့ အသံ
အစွမ်းကုန် မွန်းကြပ်မှောင်မိုက်နေတဲ့ အသံ
နှလုံးအိမ်တွေ တဖျစ်ဖျစ် ကျွမ်းမြိုက်တောက်လောင်နေတဲ့ အသံ
ဂြိုလ်တုမှ လိုက်ဖ်ရှိုး ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ရေး ယန္တရားသံ
ကာကွယ်ရေး ပညာပေးအစီအစဉ် ဖတ်ကြား သွန်သင်သံ
အဆင့်ဆင့် အမိန့်အရ တပ်လှန့်နိုးဆော်သံ
မျက်ရည်များ ဆုတောင်းများ စိတ်ထောင်းကိုယ်ကျေများ ရောနှောစီးဆင်းပျစ်ခဲသွားတဲ့ အသံ
ပေါင်မုန့်ကြား ဒိန်ခဲ ညှပ်လိုက်သံ
ကမ္ဘာတစ်ခြမ်းက ကမ္ဘာတစ်ခြမ်းကို စုတ်သတ်လိုက်တဲ့ အသံ။ ။
( မဂ္ဂဇင်းမှာပါခဲ့ ကဗျာလေးတွေရယ် အသစ်နည်းနည်းရယ် စုပြီးလုပ်မယ့် "ကဗျာရေးသလိုလို" ဆိုတဲ့ ကဗျာစာအုပ်မှာ ပါမယ့်ကဗျာလေးပါ။ မတ်ခ်ျလလောက်မှာ နှစ်ကာလများက ထွက်ပါမယ်။ ဒီကဗျာကို ဂျပန်ဆူနာမီပြီးစက ရေးဖြစ်ထားပါတယ်)
ကြော်ငြာပိုင်ရှင်ရဲ့ အနုပညာမြောက်တဲ့ အတွေးနဲ့ အရေးအဖွဲ့က စိတ်ကိုညွှတ်ကနဲဖြစ်သွားစေခဲ့တာပါ
နောက်တော့ "ကျွန်တော်ပျောက်လို့ "ဆိုတဲ့ ဒီကဗျာလေး ချရေးဖြစ်ခဲ့တယ်။
၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာကဆိုတော့ တစ်နှစ်လောက်တောင်ရှိပြီဆိုပါတော့...
ကျွန်တော်ဟာ ချောကလက်ရောင် အမွှေးစုတ်ဖွားလေး ကျွန်တော့ မျက်လုံးတွေဟာ ပတ္တမြားရောင်နီစွေးလို့
ကျွန်တော့် ကျောပေါ်မှာက အနက်ရောင် အစက်လေးတွေ အပျောက်ကလေးတွေ
ကျွန်တော့ နားတွေဟာ ချစ်စရာကောင်းလောက်အောင်ရှည်လျားနွေးထွေးနေခဲ့ကြ
ကျွန်တော့ နှုတ်သီးလေးဟာ အညိုနုရောင် စိုမြနေခဲ့တယ်
ကျွန်တော်ဟာ ၆ လသာသာ အကောင်ငယ်လေးပေါ့ဗျာ၊
နည်းနည်းပါးပါးဟောင်တတ်တာကလွဲပြီး ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် မကိုက်ခဲတတ်ပါဘူး
ကျွန်တော့ကို ဂျက်စတင်ဖီဘာ လို့ခေါ်လိုက်တိုင်း ပြန်ထူးဖို့ကို မမေ့တတ် မလျော့တတ်၊
ကျွန်တော်ဟာ သခင့်အတွက် တင်းနစ်ဘော်လုံးကို အပြေးအလွှားကိုက်ချီပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်
ကျွန်တော်ဟာ ဒီအိမ်ကြီးရဲ့ အမွှေးပွသက်ရှိအရုပ်ကလေးပဲပေါ့
ကျွန်တော့် တန်ကြေးဟာ ဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှဟာ သခင့်ပိုင်ဆိုင်သမျှထဲက နံပါတ်စဉ်တစ်ခုပါ
ကျွန်တော်သုံးတဲ့ ရှန်ပူအမျိုးအစားက စလစ်ကီ ကျွန်တော်စားတဲ့ အစားအစာက ဂလူကိုစမင် ....
ကျွန်တော်အိပ်စက်ရာဆိုတာလည်း အိထွေးမွှေးပျံ့လို့၊ လိုအပ်ရင် အဲယားကွန်းနဲ့အေးမြနေစေခဲ့တဲ့ကောင်မျိုးပါ
ကျွန်တော့်မှာ ဖန်မလီဒေါက်တာနဲ့ဘာနဲ့ပေါ့ ကျွန်တော့ခမျာ နွားနို့မသောက်ချင်တိုင်းဆူပူကြိမ်းမောင်းခံခဲ့ရ၊
ကျွန်တော့သခင်မလေးက ကျွန်တော်မရှိရင် ငိုယိုအော်ဟစ်တတ်တဲ့သူ..
ကျွန်တော်သာ ကြိမ်ကွင်းကို လွတ်အောင် ခုန်ပြနိုင်ခဲ့ရင် သူဟာ..ဒိန်ခဲတစ်တုံးလောက်တော့ ကျွန်တော့ကို ဆုချ
သူက မေ့ချင်ယောင်ဆောင်ပြလည်း ကျွန်တော်က တ၀ုတ်ဝုတ် မနားတမ်းတောင်းပြနေလိုက်တယ်..
သူမရယ်သံတွေဟာ ကျွန်တော့်ကို ရွှေရောင်လာလာတောက်စေတာ ၊ ကျွန်တော့် ကျောပေါ်ကလက်တွေကို နူးညံ့သိမ်မွေ့စေခဲ့တာ..။
ဟောသလို ညနေတွေတိုင်း ကျွန်တော်နဲ့သူမ ဒီလမ်းမမှာ လမ်းလျှောက်ခဲ့တာပေါ့
လည်ပြန်ကြည့်သွားကြတဲ့ လူစိမ်းတွေရှေ့မှာ ကျွန်တော်ဟာ ခေါင်းခါခါ လည်ခါခါ အမြီးခါခါ
ကျွန်တော့ သခင်မလေးဟာ ခေါင်းခါခါ လည်ခါခါ သံကြိုးသံတွေကို တခါခါ
အဲသလို တခါခါ အခါခါ လျှောက်ခဲ့ကြတဲ့ လမ်းမမှာ..ကျွန်တော်ဟာ ကျပျောက်ခံခဲ့ရလိုက်ရတာ။
ကျွန်တော်ဟာ သိပ်ငယ်သေးတော့ အိမ်ပြန်လမ်းကို မမှန်းဆတတ်ဘူး
ခုချိန်ဆို သခင်မလေး ကြူကြူပါအောင် ငိုကြွေးနေရောပေါ့ ၊
သူ့အော်ဟစ်ဆူပူနေသံတွေတောင် ကျွန်တော် ကြားယောင်လာလိုက်တာ
ကျွန်တော့ သခင်လည်း ကျွန်တော့်အတွက် နှမျောတသ စိတ်ပူနေတော့မှာ ၊
ကျွန်တော့် သခင်က သူ့သမီးမျက်ရည်ကို ဘယ်နှစ်နာရီတောင့်ခံနိုင်မှာပါလိမ့်
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော့နေရာမှာ နောက်တစ်ကောင် အစားဝယ်ပစ်လိုက်ပြီလား
ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော့်ကို လွယ်လွယ်ကူကူမေ့လျော့လိုက်ကြတော့မှာလား
ကျွန်တော်ဟာ ညစ်ပတ်ရင်မနေတတ်တဲ့ ကြေးရတက်ခွေးလေးတစ်ကောင်ပါ
ဒီစာဟာ ကျွန်တော်ပျောက်ကို ဖြန့်ဝေချင်တဲ့ အကြောင်းအရာပေါ့
အခု ဒီစာမှာ သခင့်ဖုန်းနံပါတ် ၉၅ဘလားဘလားဘလားဆိုတာလည်းပါနေပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော့်ကို အိမ်ပြန်ပို့ပေးကြပါဗျာ ကျွန်တော့သခင်ပေးမဲ့ဆုကြေးက နည်းမယ်မထင်ပါဘူး
တဆိတ် ဒီမှာ ကျွန်တော်ဟာ နည်းနည်းပါးပါးဟောင်တတ်ရုံကလွဲပြီး မကိုက်ခဲတတ်ပါဘူး..
တဆိတ် ဒီမှာဗျာ ကျွန်တော်ဟာ နည်းနည်းပါးပါးဟောင်တတ်ရုံကလွဲပြီး မကိုက်ခဲတတ်ပါဘူး.
ခင်ဗျားဟာ ကျွန်တော့ သခင်အသစ်များလား...
ခင်ဗျားကျွန်တော့ သံကြိုးကို ကောက်ကိုင်လိုက်ရင်ပဲ...
ကျွန်တော့် ၀န်ဆောင်မှုထဲ ခင်ဗျား ပြုတ်ကျသွားခဲ့ပြီ။ ။
22/10/2011 နေ့ည ၉နာရီ မိနစ် ၂၀ မှာ လက်မရွံ့ကဗျာဆရာ လှသန်း ကျောက်ကပ်ရောဂါနဲ့ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီ။
ဒါပေမယ့် ကဗျာဆရာဆိုတော ဘယ်တော့မှ မသေတဲ့ သူတွေ...
လက္ခဏာပညာရှင်တွေနဲ့ ဘယ်လိုမှ မပတ်သက်တဲ့လက်
လက်ရေးလှလှ ရေးတတ်ပေမယ့် လက်ညှိုးညွှန်ရာရေမဖြစ်ခဲ့တဲ့လက်
ရမ္မက်အပြည့်နဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ် ရေးချင်တယ်
ကဗျာခေတ်ကြီး မလာဘူးလို့ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲ။ ။
နောက်ထပ် ဘာကို ယုံရဦးမှာလဲ။
နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ၀တ္တရားတွေ ထူထပ်ဖိစီး
တချို့လူတွေအတွက် လိုအပ်ချင် လိုအပ်လိမ့်မယ်
အရေးတကြီး လိုအပ်နေတာ မျက်ရည်
နှစ် ၂၀ ကျော် ကြာပြီ။
ရန်ကုန်ရဲ့ မြေအောက်လောကမှာ ကျင်လည်ခဲ့သူတစ်ယောက်
အရှေ့တောင်အာရှက ဖွံ့ဖြိုးဆဲ မြို့တစ်မြို့မှာ
ကိုယ့်နာမည်ရှေ့မှာ ဘာမှ မရှိ
ကိုယ့်နာမည်နောက်မှာလည်း ဘာမှ မရှိ
သီချင်းတွေကို တ၀တပြဲ ထိုင်သောက်တယ်
ကိုယ့်ကိုကိုယ် သစ္စာဖောက်ဖို့ ကြိုစားကြည့်တယ်
မင်းရော ငါပါ အသက်ရှုမှားခဲ့ကြပြီ
ကင်မရာတွေပေါ်တည်နေတဲ့ ဘ၀တွေကို မြင်ခဲ့ရ။
အာရှကျားတွေရဲ့ ပါးစပ်ထဲက အမဲသားတစ်ဖက်
ရေတွက်စရာ ငွေစက္ကူတွေရှိဖို့လည်း အရေးကြီးတာပဲ
ကိုယ့်အိမ်ကို ပြန်ရောက်ဖို့လည်း အရေးကြီးတာပါပဲ။
ဗာဆာချီ၊ ဒိုင်ယာနာ၊ မာသာထရီဇာ
လက်ခုပ်ဆိုတာ တစ်ဘက်တည်း တီးလို့မရဘူးလေ
(ပိတောက်ပွင့်သစ်။ အမှတ် ၄၂ ။ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၁၁ )
ရန်သူက ချီးမြှင့်တဲ့ နှစ်သိမ့်ဆုတွေကို
မြန်မာကဗျာတွေကိုပထမဆုံး သင်္ဂါယနာတင်ဖို့
မြေကြီးကိုရွှေ့ထားရရင် ကောင်းမလား။ ။
ဘယ်သူ့ကို စွဲချက်တင်ရမလဲ။ ။
ရှေ့ရေးက မကောင်းနိုင်သေးဖူး။ ။
ကျင်းစိမ်ဖို့ကြိုးစားသူ ဂေါက်ရိုက်သမား။ ။
ကျူးလွန်ခဲ့သမျှမှာ ထူးချွန်ဖို့ပဲလိုတယ်။ ။
“မ” ဓါတ်ဖြစ်နေတာသေချာခဲ့ပြီပဲ..။ ။
Labels: ဆရာလှသန်း၏ ကဗျာများ
တစ်စက္ကန့် တစ်စက္ကန့်ချင်းကို နာကျင်မှုတွေနဲ့ရွှေ့ခဲ့ ရွေ့ခဲ့
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထွန်းညှိပြီးတော့ အမှောင်တိုက်ထဲ လင်းလက်ခဲ့
မျှော်လင့်ချက်တွေ မီးပွင့်မတတ် နံရံဆီ နားစွင့်နေတတ်ခဲ့
အပြင်မှာ ဘာရောင်တွေ ရွာချနေပြီလဲ
လွပ်လပ်ခြင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အမှန်တရား...
လွပ်လပ်ခြင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အမှန်တရား..
ခြောက်သွေ့ တိတ်ဆိတ်တဲ့ အခန်းနံရံမှာ
ငါတို့ဟာ ဒုက္ခနဲ့ ကြမ်းတစ်ပြေးတည်းသားတွေပါ
ငါတို့ဟာ အစစ အရာရာပါ
နုပျိူမှုဆိုလည်း ငါတို့ရဲ့ နုပျိုမှုကိုယူပါ
အချိန်ကာလဆိုလည်း ဒါ ငါတို့ပိုင် အချိန်ကာလတွေပါ
အရင်းအနှီးဆိုရင်လည်း ငါတို့ဟာ အရင်းအနှီး
အသက်သွေးခဲဆိုရင်လည်း ငါတို့ရဲ့ အသက်သွေးခဲ..
ပေးဆပ်မှုနံပါတ်စဉ်တိုင်းက အစစအရာရာဟာ ငါတို့ပါ..
ငါတို့ပေးဆပ်မှုတိုင်းဟာ ငါတို့ ယုံကြည်ချက်
ငါတို့ယုံကြည်သမျှက ငါတို့ သစ္စာတရား
ငါတို့ သစ္စာတရားခြေစုံနင်းရပ်ထားတာဟာ ငါတို့အားလုံးရဲ့ အောင်မြေ
ငါတို့ ထိုးပေးထားတဲ့ ခါး တံတားတွေပေါ်
နင်းပါ ဖြတ်ပါ လျှောက်ပါ လှမ်းပါ..
နင်းဖြတ်ပါ၊ လျှောက်လှမ်းပါ ၊ မရောက်ရောက်အောင်သွားကြပါ
ငါတို့ဟာ အရာရာပါ ၊ ငါတို့ဟာ အစစ အရာရာပါ
အခု အပြင်မှာ ရွာချနေတာ ဘာရောင်တွေများလဲ.....။ ။
( နှလုံးအိမ် မဂဇင်းမှာပါခဲ့တဲ့ သေနေရတဲ့ နာရီတွေအကြောင်း ရေးထားတဲ့ ၀တ္ထုတိုလေးရဲ့နာမည်ကို ပြန်ယူသုံးထားပါတယ်။)
တွေးတောင်တွေးမိကြမှာမဟုတ်တဲ့ စိုးရိမ်သောကစိတ်တွေနဲ့ ဧရာဝတီအတွက် ရင်ပူနေကြရပါပြီ။
ကဗျာဆရာတွေဖြစ်လို့ ကဗျာတွေနဲ့ ညည်းတွားကြရတော့တာပေါ့။
၂၀၁၁ ဇွန်လ ဧရာဝတီအထူးထုတ် ပိတောက်ပွင့်သစ်မဂ္ဂဇင်းထဲက ကဗျာဆရာတွေရဲ့ ဧရာဝတီသောကတွေပါ..
အားလုံးထပ်တူ ထပ်မျှ ခံစားနိုင်ကြမယ် ယုံကြည်မှုနဲ့ ပိုစ့်တစ်ခုအဖြစ် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ရေပြင်က ဒေါသမရှိ ပကတိ အေးချမ်းသာယာသည် ချစ်စွာသော ဧရာဝတီ ဒဂုန်တာရာ
ဒီလ အိုင်ဒီယာမှာပါခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါ။
ဂျပန်မှာ ဆူနာမီဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာဖြစ်ခဲ့ရခဲ့တဲ့ ခံစားချက်ကလေးကနေ ချရေးဖြစ်တဲ့ ကဗျာလေးဖြစ်ပါတယ်။
ဆူနာမီကြောင့် လဲပြိုကျန်ရစ်တဲ့ ဆာကူရာပင်ကနေ ပန်းလေးတစ်ပွင့်ပွင့်ပြတဲ့ အကြောင်းနဲ့ ဒုက္ခသည်ပြည်သူတွေကို စိတ်ဓါတ် ခွန်အားတွေပေးနိုင်မယ့် သီချင်းတွေဆိုပြမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဘေးအန္တရယ်တွေကြားထဲက သူတို့ပိုင် တူရိယာလေးကိုပဲယူပြီး ထွက်ပြေးသွားကြတယ်ဆိုတဲ့ ဂီတပညာရှင် ဇနီးမောင်နှံအကြောင်းကို ဂျပန်မှာ ရှိနေတဲ့ ချစ်သူငယ်ချင်း သင်းသင်းကပြောပြတာက ဒီကဗျာလေးရဲ့ အစပါ။
လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို သူငယ်ချင်းသင်းသင်းထွဋ်နဲ့ ကိုရဲထွဋ်စိုးတို့က ရှာဖွေပေးခဲ့ပါတယ်။ ဘိုလိုကို သူငယ်ချင်း ဇော်ဇော်ထွန်းကဘာသာပြန်ပေးထားတာပါ။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးက သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ လူသားအားလုံးအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ မဖြစ်ခင် ကတည်းက ကြိုတင် ခန့်မှန်း ချင့်တွက် ကာကွယ်လို့ရသမျှ ကာကွယ်နိုင်ကြပါစေလို့လည်း ဆုတောင်းနေမိပါတယ်။
ငါ့အတွက် တန်ဖိုးရှိတာ နောက်ထပ်ဘာမှမရှိတော့သလိုမျိုး
ကိုတို တူရိယာလေးကိုပဲ ငါ ရွေးချယ်မိခဲ့တယ်
နျူကလိယနံ့တွေ မွှန်နေတဲ့ ငါတို့ဇာတိမြို့လေးမှာ ဆာကူရာပင်တွေ အတုန်းအရုန်းလဲကျလို့
အဲဒီ့ ဆာကူရာပင်ကနေ ရဲရဲတောက် ပွင့်ပြနေခဲ့တဲ့ တစ်ပွင့်တည်းသော ပန်းလေးကို
ကိုတို တူရိယာလေးကို ငါရွေးချယ်ခဲ့လိုက်တယ်။
ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ငါ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ ပြန်ဆုံရသလိုမျိုး
ဂီတသံတွေ ထုံမွှန်းနေတဲ့ ငါ့တို့ အိမ်လေးမှာ ပြန်လည်နေထိုင်ခွင့်ရလိုက်သလိုမျိုး
ငါ့သားငယ်လေးရဲ့ ဟယခုချိ စကားပြောကျင့်သံလေး နာယံထဲချိုမြလာသလိုမျိုး
ကိုတို တူရိယာလေးကို ငါ ရွေးချယ်မိခဲ့တယ်
တစ်ကြိမ်အလဲကို အကြိမ်တစ်ရာမက ပြန်ထူထနိုင်ကြဖို့..
ကိုတို တူရိယာလေးကို ငါရွေးချယ်မိခဲ့တယ်။
ငါ့ အဖေရဲ့ သူရဲကောင်းပုံပြင်တွေ နောက်တစ်ကြိမ် ကြားနာခွင့်ရလိမ့်မယ်
ငါ့အမေရဲ့ အိုဒိုးရိ ရိုးရာအက မှာ နောက်တစ်ကြိမ် စည်းလိုက်ခွင့်ရဦးမယ်..
ငါတို့ အတူတကွ ကျင်းပခဲ့တဲ့ တနဘတ ပွဲတော်လေးမှာ
ငါ့ဆန္ဒတွေကို နောက်တစ်ကြိမ် ချည်နှောင် ဆုတောင်းဖို့
ကိုတို တူရိယာလေးကို ရွေးချယ်မိခဲ့တယ်….
“မျက်ရည်တွေ စီးမကျနိုင်အောင် ငါ မျက်နှာကို မော့ပြီးလမ်းလျှောက်တယ်” အဲဒီ့ သီချင်းကို ငါတီးခတ်ဖို့
“အိပ်မက်တွေ အမှန်အတိုင်းဖြစ်လာတော့မယ်” အဲဒီ့သီချင်းကို ငါ ဆိုပြနိုင်ဖို့
ငါတို့ ရဲစွမ်းသတ္တိကို ဒုက္ခနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ကြမယ်..အဲဒီ့သီချင်းမျိုးငါရေးစပ်ရမယ်...
ဘယ်လို အလွမ်းအဆွေးအောက်မှာမှ ငါတို့ ဒူးမထောက်ကြဘူး ..
ဘယ်လောက် အန္တရယ်တွေ ရှိပါစေ ငါတို့ အညံ့မခံကြဘူး..
ဒီနေ့ ကြေကွဲစရာတွေနဲ့ မိုးချုပ်ခဲ့တာ မှန်ပေမယ့်
မနက်ဖန်အာရုံဦး နေရောင်ခြည်ကို ငါတို့သာအရင်တွေ့ခွင့်ရနိုင်တယ်
နောင်နှစ် နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မှာ ဖူဂျီစံ တောင်ထိပ်က နေ၀န်းနီကိုစောင့်ကြမယ်….
အဲသလို သီချင်းမျိုးတွေ ရေးစပ်သီဆိုဖို့ ကိုတိုတူရိယာလေးကို ငါရွေးချယ်ခဲ့လိုက်တယ်
ဂီတဆိုတာ မျက်ရည်ကို နောက်ပြန်စီးဆင်းစေတဲ့ အရာပါ
ဂီတဟာ စိတ်အနာတရတွေ အတွက်ကုထုံးပါ
ဂီတဟာ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အားမန်ပါ
ဂီတဆိုတာ ကလေးငယ်တွေအတွက် နူးညံ့ ထက်ရှတဲ့ အနာဂါတ်လမ်းညွှန်ပါ
ငါတို့မကြာခင် အိမ်ပြန်ရတော့မယ် အဲသလို သံပြိုင်သီချင်းတွေသီဆိုဖို့
ကိုတို တူရိယာလေးကိုပဲ ငါရွေးချယ်ခဲ့လိုက်တယ်…
ကိုတို တူရိယာလေးတစ်ခုတည်း ငါရွေးချယ်ခဲ့လိုက်တာ......
အတုံးအရုန်းလဲကျနေတဲ့ ဆာကူရာပင်တွေ ပန်းပွင့်ပြနိုင်တဲ့ မြို့ကလေးဆီက
ငါတို့ ရဲ့…နောက်တစ်ကြိမ်ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်မရှိတော့တဲ့ ဇာတိမြို့လေးဆီကပေါ့။ ။
ဖူကူရှီးမား= Fukushima(၂၀၁၁ မတ်လ(၁၁)ရက်နေ့က ဂျပန်ငလျင်ကြီး ဆူနာမီနှင့် နျူကလိယ ဓါတ်အားပေးစက်ရုံပေါက်ကွဲမှုဒဏ် ခံလိုက်ရသော ဂျပန်နိုင်ငံရှိမြို့တစ်မြို့)
ကိုတို = Kato ( ဂျပန် တူရိယာ )
ဆာကူရာ = Sakura ( ချယ်ရီပင်)
ဟယခုချိ = hara guchi ( ကလေးများ စကားပြောလေ့ကျင့်ခြင်းသင်ခန်းစာ..)
အိုဒိုးရိ = Odori ( ဂျပန်ရိုးရာ အက)
တနဘတ = tanabata ( ၀ါးပင်မှာ ဆုတောင်း စာရွက်လိပ်ကလေးတွေကို ချိတ်ပြီး စုပေါင်းကျင်းပရသောပွဲတော်)
ဖူဂျီစံ = Fujisan ( ဖူဂျီယာမာတောင်)
My home town where there has no chance to pass through over
As nothing else valuable thing for me
But I’d chosen this instrument …KOTO
Nuclear smelled around our hometown,
Collapsed all the SAKURA trees were there
I was gazing the bravely flower which was blossomed on the tree.
Then I'd chosen this instrument.....KOTO
As we seek our family members
As we regain the chance that we could stay back at our home….there is filled with our songs
As pleasant asasound from my son who is babbling to practise HARA GUCHI
I’d chosen this instrument….KOTO
Although I suspect the air which I am breathing
Although I worry the ground where I am standing
To rebuilt hundred times for falling at one.
I’d chosen this instrument…KOTO
I shall have the opportunity to listen one more time some tales of hero from my father
I shall have the opportunity for making rhythmic beats with my mother's Odori traditional dance
For tying all of my wishes one more time
At the Tanbata festival that we used to celebrate
I'd chosen that instrument....KOTO
I look up when I walk , so my tear won't fall to play the song with that lyrics
Our dreams come true ....to sing the song with that lyrics
We shall record our braveness with this outrage
We shall not down our knee under the our sadness
How danger ?.... we're not gonna be the losers easily
Today...........although the night is falling with our mourning
Tomorrow......we are the ones who are able to touch our aurora
On this new year's day..
Lets look forward to our sunniness...
Our redly sun at the top of FUJISAN
for making this song I'd chosen the instrument KOTO ...
is something which can make the flow our the tears inversely
is something like an equipment for making motivation
is something likeatreatment for the wounds in your memories.
.is something likeadriving force for reconstruction.
.is something likeatender instruction for the children.
For singing together this chorus........
“ WE ARE GOING TO COME BACK OUR HOME SOON”
I'd chosen the instrument ...KOTO
KOTO... ... this instrument which I 'd chosen
Where .....a heap of lying all fallen Sakura trees could give flower
Where.... there has no chance to pass though over again.
Translated By Zaw Zaw Htun
(ချစ်သူငယ်ချင်း သင်းသင်းထွဋ် ၊ အချက်အလက်တွေ ရှာဖွေပေးခဲ့တဲ့ ကိုရဲထွဋ်စိုး မဂ္ဂဇင်းမှာ ဖေါ်ပြပေးခဲ့တဲ့ ဆရာမ မနော်ဟရီ နဲ့ အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်ပေးခဲ့တဲ့ ကိုဇော်ဇော်ထွန်းတို့ကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း)
ဖဘ မှာ ရော ဘလောဂ်မှာရော ကဗျာတွေ စာတွေ မတင်ဖြစ်တာကြာပါပြီ.။
အခု ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ ကဗျာတိုလေးနှစ်ပုဒ် နဲ့ တဂိုးရဲ့ ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်ကို ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးချင်လာပါတယ်။
ကဗျာတွေဟာ ခေတ်ရဲ့ သံခိပ် စကားစုတွေပါ..။
ကဗျာက အကြောင်းအရာတွေဟာ ဒိုင်ယာရီလို အဲဒီ့နေ့ရက်တွေကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။
အချိန်က ပတ္တမြားမှန်ရင် နွံမနစ်ဘူးဆိုတာကို အခိုင်အမာ သက်သေပြနေတဲ့ အချိန်ကာလပါ..
မြန်မာပြည်ကြီး တိုးတက် ကြီးပွားပါစေ။ ငြိမ်းချမ်း သာယာပါစေ။ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ အကြားအလပ်မရှိ လွတ်လပ် ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။
by Eain Dra on Friday, 12 November 2010 at 20:26
( ပိတောက်ပွင့်သစ်မှာ စိစစ်ရေးငြိခဲ့ပေမယ့် ၂၀၁၀ မြန်မာကဗျာ စာအုပ်မှာပါခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးပါ.။)
by Eain Dra on Saturday, 13 November 2010 at 23:44
ဒီမျက်ရည်တွေဟာ အရင်မျက်ရည်တွေကို ဆေးကြောပေးမယ့် မျက်ရည်ပေါ့
ဒီနေရာကနေ တစ်ဖ၀ါးချင်းပြန်စကြမယ်....ပန်းတိုင်ဆီ။ ။
( ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်လွတ်တဲ့နေ့က ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကဗျာတိုလေးဖြစ်ပါတယ်။)